Ku Bilaabidda Clam Pass si Dib Loogu Soo Celiyo Mangrove Forest - Ellicott Dredges
Shaqo goos goos ah ayaa ka bilaabma Clam Pass, Florida si loo soo celiyo kaynta mangrove
Xigasho: Eric Staats, Naples Daily News
Wicitaano ka yimid Shirkadda Dhismaha Ludlum Waxaa la qorsheynayaa in ay bilaawdo ciid ciidda Clam Pass maanta taas oo qayb ka ah dadaalka loogu jiro dib u soo celinta kaynta geedo dhimanaya ee waqooyiga Collier County, agaasimaha waaxda kormeeraya mashruuca ayaa sheegay Isniintii.
Qorshaha dib u soo celinta waxaa loogu talagalay kordhinta qulqulka biyaha ee ka soo baxa iyo ka soo baxa Clam Bay, halkaas oo daadadku ay ku dileen in ka badan 50 hektar oo mangrove ah laga soo bilaabo 1992 oo ka hooseysa balakoonnada guryaha is-kaashatada dhaadheer ee Pelican Bay.
Shaqada 'Clam Pass' waa qaybtii labaad ee dib u soo celinta oo la bilaabay. Crews waxay durba dhammaystireen qoditaanka qodaxsan wabiga woqooyi ee Clam Pass waxayna qarka u saaran yihiin inay bilaabaan laba jeexan oo kale toddobaadkan, ayuu yidhi Jim Ward, oo ah Madaxa Qaybta Adeegyada Pelican Bay.
Dhimista qulqulka iyo marinka ugu weyn ee kanaalka ayaa loo qoondeeyay inay ku kacdo $ 500,000. Dakhliga canshuuraha dalxiisayaasha ayaa soo qaadan doona tabta loogu talagalay qodidda Clam Pass, qiyaastii $ 100,000. Inta soo hartay waxaa loo kala qeybin doonaa dadka deggan Pelican Bay, iyadoo loo marayo degmo canshuur gaar ah leh, iyo WCI Communities, soosaaraha Pelican Bay. Dib u soo celinta - oo ay ku jiraan daraasado ku saabsan siyaabaha loo yareeyn karo qulqulka xaafadda ee Clam Bay - waxaa la filayaa inay ku kacdo $ 2.4 milyan waqtiga ay tahay.
Shaqada waa in la dhammeystiraa bisha Maajo 1, oo ah bilowga xilliga qulqulaya badda xeebta oo joojiso shaqada xeebta sannad walba illaa Nofembar. Ward wuxuu sheegay inuu rajeynayo inuu buuxiyo waqtigaas.
Guddoomiyeyaasha degmooyinka ayaa oggolaaday tanaasulid laga soo qaadayo xaddidaadaha waqtiga caadiga ah ee dhismaha si loogu oggolaado shaqada 24 saacadood maalintii. Taasi waxay ku bilaabmi kartaa laba toddobaad oo kale, ayuu yidhi Ward.
Aasaasihii Mangrove Action Group, oo ah koox muwaadiniin ah oo arkay kaynta oo midab isu beddelay oo isku duuban si ay u riixaan saraakiisha si ay u badbaadiyaan, ayaa bogaadiyay bilowga shaqada. "Waxaan u maleynayaa inay dhab ahaan horay u socdaan," ayay tiri Claire DeSilver, oo isha ku haysay dadaallada lagu hagaajinayo kaynta bilowga. Waxaan u maleynayaa, guud ahaan, dadku aad ayey ugu faraxsan yihiin inay horay u socoto. ”
Ward wuxuu sheegay inuu kalsooni ku qabo guusha mashruucan, oo ay isugu yimaadeen koox saynisyahano iyo khubaro geerashyo ah oo ay bilo ka wadeen dib-u-eegis ay ku sameeyeen wakaalado oggolaanaya gobolka iyo federaalka.
Qaybta ugu muuqata ee mashruuca ayaa noqon doonta soo bixitaanka 'Clam Pass'.
Ellicott® Sumadda 370 “Dragon®”Dredge iyo seddex qaybood oo qalabka dhulka dhaqaajiya ayaa fadhiyay Isniinta Clam Pass. Safafka tuubooyinku waxay kala bixiyeen xeebta oo waxay dhaafeen degmada 'Clam Pass Park', halkaas oo ciidda lagu shubi doono laguna faafin doono xeebta. Shaqaaluhu waxay ku aaseen dhuumaha xeebta dhammaadkeeda si ay ugu oggolaadaan soo galayaasha xeebta.
Qiyaastii torson xoola-dhaqato ah ayaa la raray si loogu dhaqaaqo laba god oo laga qoday woqooyiga Clam Pass gudaha aag ay dowladdu leedahay oo loo qoondeeyay inta lagu gudajiray dhismaha Pelican Bay, Ward ayaa sidaas yidhi.
Waxaa laga soo xigtay: Naples Daily News